Isakhiwo Sokwakhiwa Kwezakhiwo sisebenzisa i-AutoDesk Robot Structure - Geofumadas
Ephreli, 2019 Izifundo ze-AulaGEO
Umhlahlandlela ophelele wokusetshenziswa kweRobot Structural Analysis yemodeli, ukubalwa kanye nokuklanywa kokhonkolo kanye nezinhlaka zensimbi
Le khosi izofaka ukusetshenziswa kohlelo lweRobot Structural Analysis Professional lokumodela, ukubalwa kanye nokwakheka kwezinto ezihlelekile kwizakhiwo zikakhonkolo eziqinisiwe kanye nezakhiwo zezimboni zensimbi.
Emhlanganweni okuhloswe ngawo abaqambi bezakhiwo, onjiniyela bomphakathi kanye nabachwepheshe bendawo abafisa ukujulisa ukusetshenziswa kweRobot ukubala izinhlaka zomphakathi ngokwemigomo eyamukelwa kakhulu emhlabeni wonke nangolimi abalukhethayo.
Sizoxoxa ngamathuluzi wokudala wesakhiwo (imishayo, amakholomu, amaslayidi, izindonga, phakathi kwabanye). Sizobona ukuthi kwenziwa kanjani ukubalwa kwamacala omthwalo we-modal ne-seismic, kanye nokusetshenziswa kwamazinga asetshenziswa emithwalweni yokulumba komhlaba nasethrafini yokuqamba ngokwezifiso. Sizofunda ngokubanzi ukugeleza komsebenzi ngokwakhiwa kwezinto eziqinisiwe zikakhonkolo, siqinisekise izembatho zempi ezifunwa ukubalwa kumakholamu, imigqa kanye naphansi. Ngendlela efanayo sizobheka kakhulu amathuluzi anamandla we-RSA okuchaza ngezinto ezakhiwe ngokhonkolo oqinisiwe ngawodwana noma ngokuhlanganiswa. Sizobuyekeza ukuthi wethula kanjani amapharamitha ajwayelekile ezinhlelweni eziningilisiwe kanye nokubekwa kwensimbi yokuqinisa yamakholamu, imigqa, imishayo, izindonga nezisekelo eziqondile ezishiywe zodwa, ezihlanganisiwe noma ezisebenza.
Kulesi sifundo uzofunda ukusebenzisa amathuluzi we-RSA ekwakhiweni kokuxhuma kwensimbi, ukudala ukubukwa kwe-schematic, ukukhiqiza amanothi wokubala nemiphumela ngokuya ngamazinga aphesheya.
Le khosi kuhlelwe ukuthi iphothulwe esikhathini esingangesonto, sinikeze cishe amahora amabili ngosuku ukuze kufezekiswe izivivinyo esizokwakha ndawonye phakathi nayo yonke le nkambo, kodwa ungahamba ngejubane uzizwa ukhululekile.
Kuyo yonke le nkambo sizobe sakha izibonelo ezimbili ezizosisiza esimweni ngasinye ukubona amathuluzi wokulinganisa nawokwakha ukhonkolo nezakhiwo zensimbi ngokulandelana.
Uma ubhalisela le khosi, sikuqinisekisa ukuthi uzophumelela kakhudlwana futhi uqonde lapho wenza amaphrojekthi wokuhleleka, kanye nokungena ekusetshenzisweni kwethuluzi lokuklama elinezici eziningi, ngokuba nochwepheshe futhi osezingeni eliphezulu.
Imodeli nokuklanywa kwaqinisa ukhonkolo kanye nezakhiwo zensimbi e-RSA
Dala imodeli yejometri kuhlelo
Dala imodeli yokuhlaziya yesakhiwo
Dala ukuqiniswa kwensimbi okuningiliziwe
Bala futhi uklame ukuxhumana kwensimbi ngokuya ngemithetho
Kufanele usujwayelane nezinto zemibalo ekubalwa kwezakhiwo
Kungcono ukuthi uhlelo lufakwe noma luhluleke ukufaka inguqulo yecala
Le khosi ye-RSA ihlose ukwakhiwa kwezakhiwo, onjiniyela bezomphakathi kanye nanoma ngubani ohlobene nokubalwa nokwakhiwa kwezakhiwo
Inkambo iyatholakala nangeSpanishi
Thumela Previous«Langaphambilini Inkambo yamaphrojekthi wesakhiwo (Isakhiwo se-Revit + Robot + Steel)
Post Next Kokuhle ezindabeni ze-QGIS 3.XOkulandelayo »